वृद्धभत्ता माग्‍दा मृत्युको प्रमाणपत्र दिएपछि..::Leading Nepal News
साउन ०५, दैलेख । जिउँदो व्यक्तिलाई मृत्युको प्रमाणपत्र ! सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। तर दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिकामा यस्तै भएको छ। वृद्धभत्ता लिन पुगेका मनिराम खत्री र उनकी श्रीमती ज्योतिकला खत्रीलाई गाउँपालिकाले नै मृत्यु भइसकेको भन्दै प्रमाणपत्र थमाएको छ। कर्मचारीको लापरबाहीका कारण जीवित व्यक्तिलाई मृत्युको प्रमाणपत्र दिइएको हो। गत असार १० गते ती दम्पतीलाई गाउँपालिकाले मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र थमाएको थियो। लेखपढ नगरेका खत्री दम्पतीले उक्त प्रमाणपत्र के को हो भन्ने पत्ता पाएनन्। तर जब आफ्नै मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र भएको थाहा पाए, तब उनीहरू छाँगाबाट खसेजस्तै भए।खत्री परिवार केही महिनाअघि बर्दिया बसाइँ सरेको थियो। बसाइ सराइँको प्रमाणपत्र नलिएका कारण उनीहरु वृद्धभत्ता बुझ्न दैलेख पुगेका थिए। गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर बुढाले मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रमा रुजु गरेका छन्। तर उनको अन्यत्रै सरुवा भइसकेको छ।
‘गत मंसिरमा हाम्रो परिवार बसाइँ सरी बाँसगढी आएको थियो,’ पीडितकी छोरी नानकला अधिकारीले भनिन्, ‘वृद्धभत्ता मिलाइदिन भनेर बाआमाले गाउँपालिकामा कागजात पेस गर्नुभएको थियो। तर बाआमा वृद्धभत्ता बुझ्न जाँदा त गाउँपालिकाले उल्टै दुवै जनाको मृत्यु भएको प्रमाणपत्र पो थमायो।’सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा २०७६ वैशाख १० गते मनिराम र २०७५ चैत २५ गते ज्योतिकलाको मृत्यु भइसकेको उल्लेख छ। ‘एकातिर जिउँदै भएका व्यक्तिलाई मरेको भनेर पीडा दिइएको छ, अर्कोतिर गाउँपालिकाले वृद्धवृद्धाको जिउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ,’ अधिकारीले भनिन्। पीडित परिवारका अनुसार गाउँमा रहेका खत्री दम्पतीका छोरा रेशम खत्रीलाई बुबाआमाको मृत्यु भइसकेको भन्दै किरिया खर्चबापत दुई हजार रुपैयाँ दिन खोजिएको थियो। तर खत्रीले आफ्ना जिउँदा बुबाआमाको किरिया खर्च कसरी लिउँ ? भनेर प्रश्न गरेपछि गाउँपालिकामा खैलाबैला भएको थियो।
अधिकारीले आफ्ना बुबाआमाले फागुनसम्मको वृद्धभत्ता पाएको बताइन्। भगवतीमाई गाउँपालिका–४ का सचिव कृष्णबहादुर शाही र सामाजिक परिचालक ज्ञानबहादुर थापाका कारण यस्तो भएको पीडित परिवारको आरोप छ। ‘बाँचेका मेरा बुवाआमालाई मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार गाउँपालिकालाई कसले दियो ? ’ उनले आक्रोश पोखिन्।गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले भने समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। अध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत देवेन्द्र सिंहबारे छानबिन गरिरहेको बताए। आपूmले यस विषयमा ढिला गरी जानकारी पाएको उनको भनाइ छ।-अन्नपूर्णपोष्टबाट